မသန်စွမ်းများအတွက် ဦးနုဒေါ်မြရီဖောင်ဒေးရှင်းက ခြေတုများ အခမဲ့ တပ်ဆင်ပေးမည်
သာမာန်လူတစ်ဦးကဲ့သို့သွားလာနိုင်လောက်သည်အထိ စွမ်းဆောင်နိုင်သော ခြေတုများကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ မသန်စွမ်းများအား ဦးနုဒေါ်မြရီဖောင်ဒေးရှင်းက အခမဲ့တပ်ဆင်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
ကျားမကွဲပြားမှုအခြေပြု အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များမှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လျစ်လျူရှုခံရလေ့ရှိသည့် ကြီးမားသော ပြဿနာရပ် ဖြစ်သည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင်မူ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံ အမျိုးသမီးများအား အကူအညီပေးသည့် စင်တာများကို စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်စခန်းများ၌ တည်ထောင်ထားပေသည်။
Yenny Gamming ရေးသားသည်။
ပဒိုမန်းရှာရုပ်ထုဖွင့်ပွဲသို့ သားသမီးများ တက်ရောက်ခွင့် မရရှိ
ပန်းတနော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ကေအင်န်ယူ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟောင်း ပဒိုမန်းရှာလာဖန်း၏ ရုပ်ထုဖွင့်ပွဲကို ၎င်း၏ ဇာတိကျေးရွာတွင် ကျင်းပခဲ့ရာသို့ ၎င်း၏ သားသမီးများ လာရောက်ခွင့် မရရှိခဲ့ဟု သိရသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည့် ပဒိုမန်းရှာ၏ ကိုယ်တစ်ပိုင်း ကြေးရုပ်ထု ဖွင့်ပွဲကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းတနော်မြို့နယ်၊ တောကျောင်းကျေးရွာတွင် ယခုလ.
ဦးကိုနီကို လုပ်ကြံမှုတွင် ပါဝင်ကြောင်း ယူဆထားသည့် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း လွတ်မြောက်နေ
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ အာဏာရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ၏ ဥပဒေအကြံပေးဖြစ်သူ ရှေ့နေကြီး ဦးကိုနီအား သေနတ်ဖြင့် လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် အမှုတွင် တပ်မတော်၌ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်က နှုတ် ထွက်ထားသူ အောင်ဝင်းခိုင်ဆိုသူ ပါဝင်သည်ဟု ယူဆထားပြီး ၎င်းမှာ.
အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်နှင့် သံတမန်များ တွေ့ဆုံ
ဦးသောင်းထွန်းနှင့် နိုင်ငံတကာသံတမန်များအကြား ပထမဆုံး တွေ့ဆုံမှုဖြစ်
ခေါင်းစီးဓာတ်ပုံ - ငြိမ်းဆုဝေကျော်စိုး
၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ထပ်မံ ကျင်းပမည့်နေ့ရက် ပြောင်းလဲဖွယ်ရှိ
ယခုလကုန်မှာ ကျင်းပနိုင်ဖို့ မျှော်မှန်းပြင်ဆင်နေတဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ -၂၁ ရာစု ပင်လုံ ဒုတိယ အစည်းအဝေးကို ရက်ပြောင်းလဲကျင်းပဖို့ စဉ်းစားနေတယ်လို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက Frontier ကိုပြောပါတယ်။
စိတ်ကြွဆေးပြား တစ်သိန်းနီးပါး ဖမ်းဆီးရမိမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရားခံများကို ရှာဖွေနေ
မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ဖြစ်သည့် နတ်မြစ်အတွင်းမှ ပိုင်ရှင်မဲ့ စိတ်ကြွဆေးပြား တစ်သိန်းနီးပါးကို ဖမ်းမိခဲ့ပြီးနောက် ကွင်းဆက်တရားခံများကို လိုက်လံရှာဖွေနေကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် လုံခြုံရေးအရာရှိများက ပြောသည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးက သိမ်းထားသည့်မြေကွက်အား ပြန်ပေးရန် ညွှန်ကြားသော်လည်း မလိုက်နာသေး
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းက လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ၂၀ ခန့်ကတည်းက သိမ်းဆည်းထားခဲ့သည့် မြေကွက်အား မူလပိုင်ရှင်ထံ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် သက်ဆိုင်ရာက ညွှန်ကြားထားသော်လည်း အသင်းကို ဆက်ခံခဲ့သည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက လိုက်နာမှုမရှိသေးဟု မူလမြေပိုင်ရှင်ဟုဆိုသူက ပြောကြားသည်။